10 nooc oo bilaash ah, tayo sare leh oo ku jira 8 nooc oo kala duwan | Abuurista khadka tooska ah
Dhamaanteen ma wada lihin miisaaniyad ku filan inaad awood u yeelatid inaad heshid ilaha lacag bixinta ee la cusbooneysiin karo. Marka laga reebo xaqiiqda ah inay sidoo kale dhici karto inaan nolol raadino si shaqooyinkaasi ay uga soo baxaan raqiis iyagoo raadinaya nooc bilaash ah oo ay si fiican ugu habboon tahay.
10ka ilood ee aad hoos ka heli doontid waa ugu fiican ee aad hadda heli karto Iyo tan ugu fiican, mid kasta wuxuu metelaa qaab xaraf ah. Maxay ka kooban yihiin qaababka jirka, qaababka sare ee noocyada sanif serif ama kuwa kale ee loogu talagalay inay matalaan qorista gacanta. Haddii aad raadineyso 10 nooc oo 8 noocyo kala duwan ah, tani waa maalintaada nasiibkaaga.
1 Oranienbaum (font jirka)
2 Ailerons (ilaahyada akhrin kara serif)
3 Bohema (ilaaliyeyaal akhrin kara)
5 Nougatine (qaabeysan sans serif)
7 Soojiidashada (serif duwan sare)
8 Chunkfive (serif slab)
9 Burush (nooca far qoraal)
10 Lombok (riwaayad)
Oranienbaum (font jirka)
Ilahaani waa «Antiqua casri ah»Waxaana abuuray Ivan Gladkikh iyo Oleg Pospelov. Iyada oo ku saleysan noocyada caadiga ah ee loo yaqaan 'Bodini', xarfahaani waxay ku dhawaaqeen serifs waxayna awood u leeyihiin inay abuuraan cinwaano aad u xiiso badan.
Ailerons (ilaahyada akhrin kara serif)
Farta waxyoonay ka timid moodooyinka diyaaradaha Nadiif, dhammaan xarfaha waaweyn, waxaana markii hore loogu talagalay mashruuc moodeel duulimaad ah, laakiin naqshadeeye Adilson Gonzales de Oliveira ayaa u beddelay font loo isticmaalo shaqsi ahaan.
Bohema (ilaaliyeyaal akhrin kara)
Farshaxan farshaxan farshaxan leh oo casri ah. Bohema waxaa abuuray naqshadeeye naqshadeeye iyo sawir-qaade Joao Oliveira. Ku habboon naqshadaha gadaal, waxay ku habboon tahay cinwaannada, sumadaha, baayacmushtarka iyo munaasabadaha gaarka ah.
Naqshadeeye Trevor Baum waxaa dhiirigaliyay a font guridda. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu abuuro xoogaa cayriin ah laakiin font la safeeyey. Dhiirrigelinta ayaa ka timid maaliyaddii loo adeegsaday baseball intii u dhaxeysay 30s iyo 40s.
Nougatine (qaabeysan sans serif)
Hadday taadu tahay cajiin ama aad leedahay shaqo loo xilsaaray oo laxiriira mowduucan, Nougatine ayaa ah mida kufiican. Waa far nooc oo badan leh.
Kani waa nooca 'Vernon Adams' ee serif-dhaqameedkii uu abuuray Heinrich Jost. Qaababka xarfaha ayaa ahaa digitized iyo filaayo ee shabakadda
Soojiidashada (serif duwan sare)
Font bilaash ah oo uu abuuray 26-jirka reer France ee naqshadeeya garaafka Hendrick Rolandez. Loogu talagalay 2013, Glamour waxaa ku jira taxane ah 24 nooc oo laga soo qaaday iftiinka ilaa geesinimada 200 oo jilayaal u gaar ah il kasta.
Chunkfive (serif slab)
Serif oo diiradda saaraya geesinimada oo leh dhammaan maaddooyinka ay noqdaan font aad ugu jeceshahay madaxyada. Waxay ka kooban tahay wax yar, taas oo macnaheedu yahay inaad sidoo kale u isticmaali karto jirka qoraalada.
Burush (nooca far qoraal)
Sida bil ka hor Waxaan u keenay sadarradan 6 nooc oo far qurxin qurxoon, hada mid kale oo qaabkaas ah, laakiin aan rasmi ahayn oo casri ah, Burush Vlad Cristea iyo Raul Taciu ayaa sameeyay qaab-qoraalkan. Font leh shaqsiyad weyn.
Iyadoo la adeegsanayo qaab yar, naqshadeeyaha garaafka Swiss Alexandre Pietra ayaa na tusaya tiisa mustaqbal sans serif, Lombok. Wanaagsan yahay waraaqaha, boodhadhka iyo wax kasta oo ku lug leh muusigga elektarooniga ah, nashqadaha mustaqbalka iyo inbadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 10 nooc oo bilaash ah oo ah 8 nooc oo kala duwan oo tayo sare leh
Sawirro ku saabsan laamaha geedka qalalan ayaa kaa dhigi doona hadal la'aan
Shaambadaha lagu xusayo sannad-guuradii 100-aad ee buuggii ugu horreeyay ee Agatha Christie